Fiandrasana sy andrasana | Fiangonan'Andriamanitra maneran-tany Switzerland | Fiangonan'Andriamanitra maneran-tany Switzerland - Fiangonan'Andriamanitra maneran-tany Switzerland
Mifantoha amin'i Jesosy
Mifantoha amin'i Jesosy 2022-01
Avy amin'ny maizina mankany amin'ny mazava
Tonga nofo ny teny
Tantara momba ny habaka sy ny fotoana
Ny mpanjaka vao teraka
Ny feon-kira telo
Fahasoavana sy fanantenana
Jesosy no lalana
Haharitra hafiriana izany?
Tsy mila an’Andriamanitra
Ny tantara pastoraly
Mifantoha amin'i Jesosy 2021-04
Jesosy sy ireo vehivavy
Nisafidy ny tsara kokoa i Maria
Amin'ny fivelaran'ny fiainana
Moa ve mitazona ny tadiny eo an-tànany Andriamanitra?
Ilay farantsakely very
Ny fanasana ho amin'ny fiainana
Rahoviana indray i Jesosy no ho avy?
Mifantoha amin'i Jesosy 2021-03
Asa sy fiantsoana
Ny Fanahy Masina: mitoetra ao amintsika Izy
Vavaka ho fankasitrahana
Safidy eo amin'ny fiainana
Mifantoha amin'i Jesosy 2021-02
Teny misy dikany
Ilay Zanak'olombelona nasandratra
Ny fasana foana
Ny Fitsarana Farany
Fihaonana amin'i Jesosy
Tonga ho an'ny olona rehetra Jesosy
Marina tokoa fa Zanak'Andriamanitra izy
Mifantoha amin'i Jesosy 2021-01
Andriamanitra miaraka amintsika
Ny tena jiro
Krismasy ao an-trano
Ny vahaolana tsara indrindra amin'ny Taombaovao
Labozia fitsingerenan'ny andro nahaterahana
Ny siny vaky
Mifantoha amin'i Jesosy 2020-04
Ny voaloboka sy ny sampany
Manana safidy ny olombelona
Mbola tia antsika ve Andriamanitra?
Ny azo antoka ny famonjena
Meteza ho goavan'ny finoana
Immanuel Andriamanitra miaraka amintsika
ADN an'ny famoronana vaovao
Mifantoha amin'i Jesosy 2020-03
Nahazo fiainana mandrakizay
Jesosy: ny mofon'aina
Nitsangana i Jesosy, velona izy
Manaiky ny ota ve ny fahasoavana?
Ampitahao amin'ny mpitsara mpitsara
Hetezo ny voninkazo malazo
Amin'ny teboka ambany
Misara-bary amin'ny akofa
Mifantoha amin'i Jesosy 2020-02
Dingana amin'ny finoana
Vadin'i Pilato aho
Maty ny fanantenana
Manomboka eo amin'ny lalitra ka hatramin'ny lolo
Ny sarin'i Jesosy manontolo
Mandalo fiondranana ho an'ny Fanjakan'Andriamanitra
Ny voary vaovao
Ny fo vaovao
Ny fanahin'ny fahamarinana
Ny fiainana navotana
Fanekena ny famelan-keloka
Mifantoha amin'i Jesosy 2020-01
Mamirapiratra ny hazavana
Fahazavan 'i Kristy eo amin' izao tontolo izao
Fanomezan'Andriamanitra ny zanak'olombelona
Ny tantara fiterahana lehibe indrindra
Ho fitahiana amin'ny hafa
Mankanesa aty amiko
Ny fahafenoan'Andriamanitra tsy manam-petra
Famantarana ny fotoana
Ankizy iray sarotra
Ny vesatry ny ota
Ny Sakafo Harivan'i Jesosy farany
Mifantoha amin'i Jesosy 2019-04
Mandria an'i Jesosy
Ny safidy tsara kokoa
Ny fanompoam-pivavahana marina
Miaina ny tena fahafahana
Manatanteraka ny lalàna
Ny tsara indrindra amin'ny fanomezana rehetra
Mifantoha amin'i Jesosy 2019-03
Fikambanana miaraka amin'Andriamanitra
Ny fiangonana marina
Fantatr'i Jesoa marina tsara anao
Loharanon'ny rano velona
Misaora ny mpampianatra tsara indrindra
Ny famitahana ny harena
Miaraka amin'i Jesosy
Mifantoha amin'i Jesosy 2019-02
Mivoaka i Lazarosy!
Iza moa i Barabbas?
Finoana - jereo ny tsy hita maso
Matahotra ny fitsarana farany?
Amin'ny toerana mety amin'ny fotoana mety
Jesosy, ilay fanekena tanteraka
Ny Fanahy Masina dia mitoetra ao anatinao!
Mifantoha amin'i Jesosy 2019-01
Ny dianao manaraka
Andriamanitra dia miaraka amintsika
Rehefa tsara ny fotoana
Jesosy: ilay fampanantenana
Ny hevitr'Andriamanitra amin'ny teny
Ny tany manga manga
Jesosy: Ny Fanjakan'Andriamanitra
Kristy velona ao aminao!
Mifantoha amin'i Jesosy 2018-03
Aoka hamirapiratra i Kristy
Fanantenana ho an'ny jamba
Ahoana ny hevitrao momba ny tsy mpino?
Izany no tiako momba an'i Jesoa
Mifantoha amin'i Jesosy 2018-02
Ny varimbazaha varimbazaha
Jesosy no voalohany
Ny famonjena dia ny adin'Andriamanitra
Pond na renirano
Jesosy - ny fahendren'ny olona
Ny vatofantsika ho an'ny fiainana
Fiainana be dia be
Ny fiavian'ny Tompo
Mitadiava fihavanana amin'i Jesosy
Mifantoha amin'i Jesosy 2018-01
Tena tanteraka izany
Vaovao tsara ho an'ny rehetra
Lesona avy amin'ny fanasan-damba
Ny voalohany dia ny farany
Ny Fanahy Masina no mahatonga izany
Fiadanana amin'ny Andron'ny Mpinamana
Journal succession 2019-01
Hahafantatra an'Andriamanitra amin'ny saina rehetra
Ny vidin'ny fanjakan'Andriamanitra
Miaina ao amin'ny fitiavan'Andriamanitra
Fanompoam-pivavahana na sampy sampy
Fanorenana efatra momba an'Andriamanitra
Journal succession 2018-04
Fitsipika fototra amin'ny fanompoam-pivavahana
Manome ny fiainana marina Andriamanitra
Fanasana amin'ny Fanjakan'Andriamanitra
Mitadiava fiadanana anaty
Fifandraisana mifanaraka amin'ny ohatr'i Kristy
Inona no fanomezana tsara?
Journal succession 2018-03
Mijanòna ao amin'i Kristy
Jesosy - ilay sorona tsara kokoa
Aoka Andriamanitra no ho toa azy
Malemy fanahy ve ianao?
Teny tokana ihany
Journal succession 2018-02
Tena vita izany
Avia, Jesosy Tompo
Tsy misy manasaraka antsika amin'ny fitiavan'Andriamanitra
Mitoria tory - Gordon Green
Journal succession 2018-01
fitoriana ny filazantsara
Fampahatsiahivana amin'ny fotoana mety
Matio 9: Tanjon'ny Fanasitranana
Ny fifandraisan'Andriamanitra amin'ny vahoakany
Omeo baiko ny Tompo ny asanao
Nahoana no mivavaka?
2017-04 mpandimby ny Magazine
Nikarakara azy izy
Manapaha hevitra hitsiky
Matio 7: Ny Toriteny teo An-tendrombohitra
2017-03 mpandimby ny Magazine
Mialà ary miandrasa
Ny fandrika fikarakarana
Matio 6: Ny Toriteny teo An-tendrombohitra
Ny toeram-pitrandrahana XMUMX Mpanjaka
2017-02 mpandimby ny Magazine
Fanandramana any amin'ny mandrakizay
Amin'ny fahatokiana eo anoloan'ny seza fiandrianana
Matio 5: Ny Toriteny teo An-tendrombohitra
Salamo - fifandraisana amin'Andriamanitra
Ny Harenan'i Solomona Mpanjaka (ampahany 21)
2017-01 mpandimby ny Magazine
Ny olan'ny faharatsiana eto amin'ity izao tontolo izao ity
Manomboha amin'Andriamanitra miaraka amin'Andriamanitra
Ny Toriteny teo An-tendrombohitra (ampahany 1)
Mitory fahasoavana mora ve isika?
Ny Harenan'i Solomona Mpanjaka (ampahany 20)
2016-04 mpandimby ny Magazine
Mahagaga ny fitiavan'Andriamanitra
Manome fotoana hafa ve Andriamanitra?
Fatiantoka. , ,
Ny ampahany amin'ny vola madinika
Fanapahan-kevitra - hijery an'Andriamanitra
Tsara loatra ve ny ho marina?
Ny Harenan'i Solomona Mpanjaka (ampahany 19)
2016-03 mpandimby ny Magazine
Miaraka amin'i Jesosy amim-pifaliana sy alahelo
Tsy hiverina amin'ny mahazatra
Manapaha hevitra amin'izao fotoana izao
Fitsanganana amin'ny maty sy fanindroany an'i Jesosy
Ny maha-izy antsika vaovao ao amin'i Kristy
Ny Harenan'i Solomona Mpanjaka (ampahany 18)
2016-02 mpandimby ny Magazine
Finday ny muse
Tsy irery izahay
Ny Harenan'i Solomona Mpanjaka (ampahany 17)
2016-01 mpandimby ny Magazine
I Jesosy ve no lalana tokana?
Inona no mampiavaka an'i Jesosy?
Mizara ny finoana
Ny olon-kafa dia hanao izany
Iza no fahavaloko?
Antihistamine ho an'ny fanahy
2015-04 mpandimby ny Magazine
Andriamanitra telo izay iray
Andriamanitra dia fihetseham-po
Avoahy ny herin'Andriamanitra amin'ny vavaka
Ny Fanjakan'Andriamanitra (ampahany 6)
Ny Harenan'i Solomona Mpanjaka (ampahany 16)
2015-03 mpandimby ny Magazine
Lalàna sy fahasoavana
GPS avy amin'Andriamanitra
Andininy vongan volamena
Manome antsika feno izy
Ny Fanjakan'Andriamanitra (ampahany 5)
2015-02 mpandimby ny Magazine
Fahasoavana amin'ny fijaliana sy ny fahafatesana
Ho an'ny sitrapon'ny mpanjaka
Ny Fanjakan'Andriamanitra (ampahany 4)
Ny Harenan'i Solomona Mpanjaka (ampahany 15)
Inona no Dr. Faustus dia tsy nahalala
2015-01 mpandimby ny Magazine
Ny maha-isika antsika marina
Izaho dia tsy 100% Venda
Raha izaho no Andriamanitra
Ny Fanjakan'Andriamanitra (ampahany 3)
Ny Harenan'i Solomona Mpanjaka (ampahany 14)
Salamo 9 sy 10
2014-04 mpandimby ny Magazine
Oviana i Jesosy no teraka?
Ilay mpanjaka manetry tena
Ny Fanjakan'Andriamanitra (ampahany 2)
Ny Harenan'i Solomona Mpanjaka (ampahany 13)
1914-1918: Ady Namono An'Andriamanitra
2014-03 mpandimby ny Magazine
Fantaro ny fanjakana
Hitako ao aminao i Jesoa
Amin'ny fotoana mety amin'ny toerana mety
Ny Fanjakan'Andriamanitra (ampahany 1)
Ilay alika mahatoky
Salamo 8: Tompon'ny Hopeless
Andriamanitra - fampidirana
Fantaro ny zava-misy an'Andriamanitra I
Ny fahatanterahan'Andriamanitra ny zava-misy II
Ny programa fanavotana
Ny fahagagana momba ny nahaterahan'i Jesosy
Iza io lehilahy io?
Teraka ho faty
Nahoana i Jesosy no tsy maintsy maty?
Jesosy ao amin'ny Testamenta Taloha
Jesosy talohan'ny nahaterahany
Tsy irery i Jesosy
Ny fahalalana an'i Jesoa Kristy
Matokia ny Fanahy Masina
Fanahy Masina olona
Iza moa Andriamanitra?
Fanontaniana momba ny Andriamanitra telo izay iray
Telo ao anaty
Ny Andriamanitra telo izay iray ao amin'ny Baiboly?
Andriamanitra: andriamanitra telo?
Fiainana miaraka amin'Andriamanitra
Aoka ianao ho fianakaviana
Ny fahagagana amin'ny fahaterahana indray
Teny manana fahefana
Fahantrana sy fahalalahan-tanana
Inona no dikan'ny hoe ao amin'i Kristy?
Tsy rariny izany
Ahoana no fomba hiatrehantsika ireo tsy mpino?
Miahiahy amin'ny famonjena anao
Mahatsiaro tena meloka
Fifandraisana am-po miaraka amin'Andriamanitra
Kristy dia eto!
Nahoana Andriamanitra no mampijaly ny Kristianina?
Fanambaràn'Andriamanitra momba ny fitiavana antsika
Jesosy: Ilay mpanadio
Voahangy amin'ny tsilo
Ny vaovao tsara
Ny fototry ny fahasoavana
Tsara loatra ny ho marina
Aza manararaotra fahasoavana
Andriamanitra tsy mitsahatra velively fitiavana
Ny famonjena izao tontolo izao
Andriamanitra dia manambara ny fahasoavana
Lova tsy hay lazaina
Niorina tamin'ny famindram-po
Karl Barth: MPAMINANY ao amin'ny fiangonana
Ny litera romanina dia niteraka riaka
Ny asan'ny fiangonana
Inona no atao batisa?
Inona ny fiangonana?
Fonctiona enina amin'ny fiangonana
Ny Fiangonana ao amin'ny Apokalypsy 12
Ny tontolon'ny fanahy
Ny tontolon'ny anjely
Satana ny devoly
Satana tsy Andriamanitra
Ny tranonao any an-danitra?
Fitsanganana amin'ny maty
Ny fiafarana dia ny fiandohana vaovao
Ny fotopampianaran'ny Rapture
Matio 24 momba ny farany
Inona no atao hoe famonjena?
Miaina amin'ny andro vitsy ve isika?
Lazara sy ilay lehilahy manan-karena
Fomba iray ihany?
Ny lanitra ve sa tsia?
efa akaiky ny fanjakan'Andriamanitra
Ilay mpitsara any an-danitra
Famindram-po ho an'ny rehetra
Ny fiakaran'i Jesosy
Ny mombamomba ahy vaovao
Miaina ho an'Andriamanitra na amin'i Jesosy
Ny masoko dia mahita ny famonjenao
Ny fiadian'Andriamanitra rehetra
Ny fanompoam-pivavahana mora saina
Inona no kristiana tsara
Famonjena ho an'ny olona rehetra
Tsy miadana amin'Andriamanitra
Jesosy: angano fotsiny
Mampody rano ho divay
Inona no atao hoe fahalalahana?
Ny fiainana ananan'i Jesosy
Tsy misy henatra, fahasoavana manala baraka
Raiso ny fiaramanidina
Antony ahazoana fanantenana
Gardes and deserts
Kristy ny zanak'ondrintsika Paska
Voasoratra eo an-tanany
Ny hanoanana lalina ao anatintsika
Miverena ary mijanona mandrakizay
Ny sitrapon'ireo vahiny
Mpanohana ny finoana
Aoka ho fitahiana ho an'ny hafa
Ao amin'ny ghetto
Tsy misy zavatra tokony hatao
Arovy amin'ny mpanaraka ahy
Xmas - Krismasy
Ny masonao ihany
Ny taranak'i Abrahama
Alao ny sabatrao!
Ny fomba sarotra
Ny mpanelanelana no hafatra
Ny filàna lehibe indrindra
Fialantsasatra eo an-toerana
Piece per piece
Ahoana no fomba ahafahako mivavaka amim-pahombiazana?
Nitondra fiadanana izy
Hamafiso ireo laharam-pahamehana
Miverena toy ny anao!
Tsy misy Andriamanitra aminao
Miresaka momba ny fiainana
Fiandrasana sy fiandrasana
Iza moa i Nikodemosy?
Hoy Jesosy: Izaho no fahamarinana
Ny medium dia ny hafatra
Tonga tsy hita maso ilay tsy hita maso
Kristy, ny faran'ny lalàna
Omeo ny ratsy indrindra ho an'ny tompony
Fahotana fa tsy fahadisoam-panantenana?
Misy sazy mandrakizay
Tsy mahazo maimaim-poana ianao!
Ny Universe manitatra
Andriamanitra koa dia tia ny tsy mino an'Andriamanitra
Fampihavanana - inona io?
Ny maha-Izy Azy ao amin'i Kristy
Jaona Mpanao Batisa
Ny Prince of Peace
nataon'i Josepf Tkach
Mamofona ny rivotra
Mankalaza ny Ascension izahay
Advent sy Noely
Ataovy ny ankamaroan'ny fahafahana
Mistery sy tsiambaratelo
Vaovao tsara ny filazantsara
Ry Lazarosy, mivoaha!
Mialà ary miandrasa!
Andriamanitra mpanefy tanimanga
Mbola tia anao ve Andriamanitra?
Sakafo tsy hay hadinoina
Ahoana ny fampiofanana ny feon'ny fieritreretanareo?
Asandrato ny Tompo, ry fanahiko
Ho afa-miala eto ve aho?
Ankafizo ny dia
Fomba tsara kokoa
Manjary diamondra ara-panahy
Tsara kokoa noho ny vitsika
Nahoana no tsy namaly ny fivavako Andriamanitra?
Voafidy avy amin'Andriamanitra
Mpanao lalàna tsy fantatra anarana
Zava-mahadomelina sy tsy fivadihana
Andriamanitra ao anaty boaty
Tsy misy mandositra
Fantaro an'i Jesosy
Hajao isan'andro isan'andro
Iza no mamaritra ny ataontsika?
Aiza no misy an'i Jesosy?
Mazava ho azy fa ny Baiboly
Ny maha zava-dehibe ny Baiboly
Ahoana ny amin'Andriamanitra?
Iza moa i Jesosy Kristy?
Ny hafatr'i Jesosy
Inona ny ota?
Iza na inona i Satana?
Inona no fifanekena vaovao?
Inona ny fanompoam-pivavahana?
Ny baikon'ny misiona
Lohahevitry ny Baiboly
Fibebahana, fibebahana ary fibebahana
Kristy ao aminao
Voahombo tamin'ny hazo fijaliana ao amin'i Kristy
Marina tsy misy asa
Manantena ny rehetra
Kalandrie an'ny WKG
Ny ivon'ny WKG
Teolojia mifototra amin'i Kristy
Fiangonana, teraka indray
Mampianatra ny fampihavanana rehetra ve isika?
Famerenana ny WKG
Mino ny WKG
Ny Andriamanitra telo izay iray
Ny Soratra Masina
Ny tontolo ara-anjely
Ny fihetsika kristianina
fahazoana antoka ny famonjena
Ny Sabata Kristiana
Ny Fanasan'ny Tompo
Ny rafitry ny fitantanana ny fiangonana
Ny fiavian'i Kristy fanindroany
Ny lovan'ny mpino
Ny fitsarana farany [fitsaràna mandrakizay]
Ny fanjakana afovoany
Ny arivo taona
Taratasy amin'ny mpiasa avy amin'i J. Tkach
MB 2018 Desambra
MB 2018 Novambra
MB 2018 Septambra
MB 2018 Janoary
MB 2017 Desambra
MB 2017 Novambra
MB 2017 Septambra
MB 2017 Aog
MB 2017 Jolay
MB 2017 Jona
MB 2017 Mey
MB 2017 Aprily
MB 2017 Martsa
MB 2017 Febroary
MB 2017 Janoary
MB 2016 Desambra
MB 2016 Novambra
MB 2016 Septambra
MB 2016 Aog
MB 2016 Jolay
MB 2016 Jona
MB 2016 Mey
MB 2016 Aprily
MB 2016 Martsa
MB 2016 Febroary
MB 2016 Janoary
MB 2015 Desambra
MB 2015 Novambra
MB 2015 Septambra
MB 2015 Aog
MB 2015 Jolay
MB 2015 Jona
MB 2015 Mey
MB 2015 Aprily
MB 2015 Martsa
MB 2015 Febroary
MB 2015 Janoary
Malagasy | ITALIANINA | FRANTSAY
TEXT TEXT> AUDIO
Fiteny hafa- Alemanina- frantsay- Italiana- Anglisy- Espaniola- Portiogey- Holandey- Luxembourgish- Danoa- Norveziana- soedoà- Finnish- Poloney- Bulgarian- Rosiana- Latina------------ Afrikaans- Albaney- Amharic- Arabo- Armeniana- Azerbaijani- Basque- Bengali- belarosiana- Burmese- Bosnianina- Cebuano- Chichewa- Sinoa- Estonianina- Galisiana- Zeorziana- Grika- Haitian- Hawaiian- hebreo- Hindi- Indoneziana- Irlandey- Islandy- Japoney- Java- Kazakh- Catalan- Khmer- Kyrgyz- Koreana- Corsican- Kroaty- Kiorda- Lao- Latvian- Lithuanian- Malagasy- Malayalam- Maleziana- Maltese- Maori- Marathi- Masedoniana- Mongoliana- Nepaley- Pashtun- Persian- Filipiana- Punjabi- Romanianina- Samoa- Scottish- Serba- Sesotho- Sindhi- Sinhala- Slovak- Slovenian- Somali- Sodaney- Swahili- Tajik- Tamil- Telugu- Thai- Czech- Tiorka- Okrainiana- Hongroà- Urdu- Uzbek- Vietnamese- Welsh- Yoruba- Zulu
lahatsoratra > Miresaka momba ny fiainana > Fiandrasana sy fiandrasana
Tsy hohadinoiko mihitsy ny valin-teny nomen’i Susan vadiko rehefa nilaza taminy aho fa tena tiako izy ary raha afaka mieritreritra ny hanambady ahy izy. Eny, hoy izy, nefa tsy maintsy mangataka alalana amin’ny rainy aloha izy. Soa ihany fa nanaiky ny fanapahan-kevitray ny rainy.
Fihetseham-po ny fiandrasana. Miandry fatratra hetsika tsara ho avy izy. Niandry tamim-pifaliana koa izahay ny andro fampakaram-badinay sy ny fotoana hiarahanay hiarahana.
Samy mahatsapa ny fiandrasana. Miandry valin-teny tsara ny lehilahy iray vao avy nangataka hanambady. Miandry ny fahaterahan’ny mpivady ny mpivady. Miandry fatratra izay mety ho azony amin’ny Krismasy ny ankizy iray. Sahiran-tsaina ny mpianatra iray miandry ny naoty ho azony amin’ny fanadinana farany. Miandrandra ny fialan-tsasatra efa nandrasana hatry ny ela izahay.
Ny Testamenta Taloha dia milaza amintsika ny fiandrasana lehibe ny fiavian’ny Mesia. Mampihoby mafy ianareo, mitondra fifaliana lehibe. Eo anatrehanao dia mifaly toy ny firavoravoana amin’ny taom-pijinjana izy, ary mifaly amin’ny fizarana babo.” (Isaia 9,2).
Ao amin’ny Filazantsaran’i Lioka isika dia mahita mpivady mpivavaka, Zakaria sy Elizabeta, izay miaina amim-pahamarinana sy tia an’Andriamanitra ary tsy misy tsiny eo anatrehan’Andriamanitra. Tsy nanan-janaka izy ireo satria momba i Elizabeta ary samy efa antitra be.
Ary nisy anjelin'ny Tompo nankany amin'i Zakaria ka nanao hoe: Aza matahotra, ry Zakaria, fa efa nohenoina ny vavakao, ary Elizabeta vadinao dia hiteraka zazalahy aminao, ary ny anarany hataonao hoe Jaona. Dia ho faly sy ho ravoravo ianareo, ary maro no hifaly amin’ny nahaterahany.” (Lioka 1,13-14).
Azonao alaina sary an-tsaina ve ny fifaliana niely tamin’ny alalan’i Elizabeta sy Zakaria rehefa nitombo tao an-kibon’izy ireo ilay zaza? Nilaza tamin’izy ireo ny anjely fa ho feno ny Fanahy Masina ny zanany lahy alohan’ny hahaterahany.
“Ary maro amin’ny Zanak’Isiraely no hampody ho amin’i Jehovah Andriamaniny. Ary Izy handeha eo alohany amin’ny fanahy sy ny herin’i Elia, hampody ny fon’ny ray ho zanaka, ary ny tsy manoa ho amin’ny fahendren’ny marina, mba hamboatra firenena voaomana ho an’ny Tompo” (Lio. 1,16-17).
Hantsoina hoe Jaona Mpanao Batisa ny zanany lahy. Ny fanompoany dia ny hanomana ny lalana ho an’ny Mesia ho avy, dia i Jesosy Kristy. Tonga ny Mesia - Jesosy no anarany, ilay Zanak’ondry izay hanaisotra ny fahotan’izao tontolo izao sy hitondra ny fiadanana nampanantenaina. Amin’ny alalan’ny herin’ny Fanahy Masina, dia mitohy ny asa fanompoany ankehitriny rehefa mandray anjara mavitrika ao Aminy isika eo am-piandrasana ny fiverenany.
Tonga ary mbola ho avy indray Jesosy hanatanteraka sy hamorona ny zava-drehetra ho vaovao. Rehefa mankalaza ny fahaterahan’i Jesoa isika dia miandrandra ny fiavian’i Jesoa Kristy Mpamonjy antsika fanindroany.
Ny tena fanantenana ananantsika Kristianina no tena manome hery antsika hiaina. Na iza na iza mitoky amin’ny fiandrasana ny fiainana tena tsara kokoa ao amin’ny fanjakan’Andriamanitra dia hahita ho azo zakaina kokoa ny olana rehetra eto an-tany.
Ry mpamaky malala, tsapanao ve fa amin’ny sainao misokatra dia afaka mihaona amin’i Jesosy Mpamonjy anao ianao dieny izao. Asaina ho any amin'ny akanin-jaza ianao. Inona avy ireo fihetseham-po miandrandra tsapanao? Gaga ve ianao rehefa misaintsaina ny famoahana ireo antsipirian-javatra nampanantenaina tamin’ny alalan’ny Mpanavotra anao izay miseho eo imasonao?
Lahatsoratra amin'ny teny alemà • Dikanteny miaraka amin'i Google (GTranslate)
© COPYRIGHT 2022 - WELTWEITE KIRCHE GOTTES (SCHWEIZ) - CONTACTS - LEGAL NOTES - Fitsipika - CONTACT